सल्यान, ८ ज्येष्ठ ।
स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन हासिल गरेका सर्जक ध्रुवराज धिताल सल्यानको बागचौर नपा वडा नम्बर १० का स्थानीयबासी हुन ्। बुबा दयाराम र आमा शेर्मा कुमारी धितालको कोखबाट २०४० सालमा जन्मिएका हुन् ।पछिल्लो पुस्ताका युवा कलाकारहरु संगसैगै कलाकार तथा सर्जक ध्रुवराज धितालको पनि आफ्नै पहिचान छ । युवा पूस्तामा कतिपयले शिक्षालाई अगाडि बढाउन नसकिरहेकै अवस्थामा धिताल भने शिक्षा क्षेत्रमा पनि अगाडि छन् । उनले आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिदै गीत, संगीततिर पाइला अगाडि बढाइरहेका छन् ।
अहिले गाडिहरुमा यात्रा गर्दा ‘साह्रै मन अत्याउने’ गित खुवै घन्किरहेको सुनिन्छ । गीतले सवैको ध्यान खिचीरहेको हुन्छ । बजार हुँदै गाउँ, टोल र बन पाखाहरुमा समेत गुञ्जिन थालेपछि गीतले एकाएक चर्चा बटुलिरहेको छ ।
उक्त गीत अहिले सवैमाझ लोकप्रिय भईरहेको छ । भावसंगै शब्द र लयको मिठासले नै गीतलाई जीवन्तता दिने गर्दछ । त्यस्तै गीतलाई जीवन्तता दिन सक्षम भएका छन् कलाकार धिताल ।
सफलताले कसलाई पो खुसी दिदैन र ? जनताको जीब्रोमा नै झुन्डिने गरी आफ्नो श्रृजना पस्कना पाउँदा कसलाई पो खुसी हुदैन होला र ? यस्तै खुसिमा छन् अहिले कलाकार तथा गीतका सर्जक ध्रुवराज धिताल ।
यस्तो छ, उनको गीत संगीततिरको यात्रा ।
सर्जक तथा संगीतकारको परिचय बनाउन सफल धितालले २०६१ सालमा रेडियो नेपालबाट स्वर परिक्षा पास गरेर सांगीतिक क्षेत्रमा लागेका हुन् ।
उनको तर्फबाट नेपाली गीतसंगीतको बजारमा जम्माजम्मि डेढ दर्जन गीत निमार्ण भएका छन् । कुनै बेला लोकप्रिय सर्जक रमेश बिसीको शब्द रचना रहेको ‘स्याउ ल्याइदिउ कि केरा’ बोलको गीत निक्कै चर्चामा थियो ।
शब्द जति नै मिठो र भावनात्मक भए पनि संगीतको गुणस्तर कम्जोर छ भने गीत झन कम्जोर बन्न जान्छ । उल्लेखीत गीतको शब्द उत्तिकै राम्रो छ र बलियो छ । त्यसैमा संगीत झनै राम्रो छ ।
२०६४ सालमा निमार्ण भएको गीत आँखैको छायाले, पाकेको फल, सम्झ्यो नजिक, बिस्र्यो टाढा, रोधीको ख्यालैमा, दुई साता अघिमात्रै बजारमा आएको लोक तथा दोहोरी गीत ‘साह्रै मन अत्याउने’ उनले संगीत र्सिजना गरेका चर्चित भाकाहरू हुन् ।
केही वर्ष अघिसम्म नेपाली लोकगीत संगीतको क्षेत्रले बाटो बिराएको स्वीकार्दै धिताल भन्छन्, ‘फेरी नेपाली लोक गीतले आफ्नो बाटो समाल्न सफल भएको छ, लोकगीत आम लोकजीवनको गीत भएका कारण यसको मर्मअनुरुप र्सिजना हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।’
उनले भने, ‘आधुनिक बजारले लोकगीतलाई असर गर्छ, त्यसैमा पश्चिमा संस्कृतिको मुल तारो नै हाम्रो लोकसंस्कृति परेको छ, हाम्रोमा भएको पनि यहि हो । आधुनिक बजारबाट लोकगीतलाई बचाउनु नै अहिलेका सर्जक, गायक र सम्पूर्ण कलाकर्मीको लागि चुनौति हो ।’